कसरी Photoshop 2022 मा एक वाटरमार्क बनाउने - Creativos अनलाइन क्रिएटिव अनलाइन
फोटोशपमा कसरी वाटरमार्क सिर्जना गर्ने
una वाटरमार्क तपाईं आफ्नो फोटोहरुमा हस्ताक्षर गर्न अनुमति दिन्छ र त्यसलाई वेवास्ता गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई नेटवर्कमा अपलोड गरेर, तपाईं जोखिम चलाउनुहुन्छ कि तपाईंको छवि तपाईंले लिनु भएको योग्यतालाई श्रेय बिना नै प्रयोग गरिएको छ। वास्तवमा, यदि तपाईं आफ्नो फोटोहरू बेच्नुहुन्छ भने, उपयोगकर्ताले के देख्न सक्दछन् र पहुँचलाई सीमित गर्न सक्दछन्, र सबै भन्दा माथि, प्रयोग महत्त्वपूर्ण छ।
व्यक्तिगत रूपमा, मलाई मेरो तस्बिरहरूमा वाटरमार्कहरू परिचय गर्न गाह्रो छ, तर जब म यो काम गर्दछु, वाटरमार्कले यसको कार्य पूरा गर्दा, चित्रको प्रख्यातता चोर्दैन भने म अधिक सहज महसुस गर्छु। यस पोष्टमा, म तपाईंलाई फोटोशपमा वाटरमार्क कसरी बनाउने भनेर सिकाउन जाँदैछु, बहुमुखी, कालो र हल्का पृष्ठभूमिहरूको लागि मान्य। म तपाइँलाई कसरी तपाइँको वाटरमार्क सिर्जना गर्न सिकाउनेछु लोगोबाट वा स्क्र्याचबाट त्यसोभए तपाई एक हुनुहुन्छ जसले निर्णय लिनुहुन्छ कि तपाइँ कसरी आफ्नो फोटोग्राफरमा हस्ताक्षर गर्न चाहानुहुन्छ।
1 पाठबाट वाटरमार्क
1.1 पारदर्शी पृष्ठभूमिको साथ एक फाइल सिर्जना गर्नुहोस्
1.2 फन्ट छनौट गर्नुहोस्
1.3 पाठ तहका विशेषताहरू परिमार्जन गर्नुहोस् र ड्रप छाया प्रभाव लागू गर्नुहोस्
1.4 PNG मा तपाईंको वाटरमार्क बचत गर्नुहोस्
2 लोगोबाट वाटरमार्क
2.1 लोगो खोल्नुहोस् र पृष्ठभूमि हटाउनुहोस्
2.2 पाठको विशेषताहरु परिमार्जन गरौं
2.3 दृष्टान्तको विशेषताहरु परिमार्जन गरौं
3 एउटा अन्तिम नोट
3.1 म कसरी मेरो वाटरमार्क थप्न सक्छु?
पारदर्शी पृष्ठभूमिको साथ एक फाइल सिर्जना गर्नुहोस्
हामीले गर्ने पहिलो कुरा हो एडोब फोटोशपमा नयाँ फाईल सिर्जना गर्नुहोस्। आयामहरू वास्तवमै धेरै फरक पर्दैन, तर म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाई त्यस्तो आकार छनौट गर्नुहोस् जुन धेरै ठूलो छैन, किनकि यो तस्बिरहरूमा तपाईंको वाटरमार्क घुसाउँदा यो अधिक आरामदायी हुनेछ। मैले एक हजार पिक्सेल ग्रिड चयन गरेको छु, यो हामी के गर्न चाहन्छौंका लागि उपयुक्त आकार हो। फाइल सिर्जना गर्नुभन्दा पहिले, प्रिसेट्स विवरणमा तपाईंले पारदर्शी पृष्ठभूमि छान्नुपर्नेछ।
फन्ट छनौट गर्नुहोस्
मा क्लिक गर्नुहोस् पाठ उपकरण र फन्ट छनौट गर्नुहोस् तपाई के चाहानुहुन्छ। यस अवस्थामा, तपाईसँग पूर्ण स्वतन्त्रता छ, किनकि यो ट्रिकले प्राय: कुनै पनि प्रकारको फन्टको साथ काम गर्दछ। मैले नियमित खुला स्यानको लागि छनौट गरेको छु र यसलाई p० pt को आकार दिएर मैले केन्द्रमा लेखेको छु जुन मेरो हस्ताक्षरको रूपमा काम गर्दछ। यसलाई सेतो वा हल्का खैरो रंग दिनुहोस्।
पाठ तहका विशेषताहरू परिमार्जन गर्नुहोस् र ड्रप छाया प्रभाव लागू गर्नुहोस्
हामी जाँदै छौं 40% मा पाठ तह भर्न कम गर्नुहोस्। अब हामी के गर्छौं हामीलाई हाम्रो हस्ताक्षर अधिक बहुमुखी बनाउन मद्दत गर्दछ, यसैले यसलाई प्रत्येक तस्बिरमा अनुकूल बनाउनको लागि यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्दैन। पहिले, पाठ तहमा हामी ड्रप छाया प्रभाव वर्णन गर्दछौंतपाईंले भर्खर fx प्रतीक थिच्नु पर्छ ("तह" प्यानलको तल अवस्थित) र ड्रप छाया चयन गर्नुहोस्। उनीहरूले यो प्रभावको लागि परिभाषित प्यारामिटरहरू यस पटक तपाईले छनौट गर्नुभएको टाइपफेसमा निर्भर गर्दछ, तपाईले परिक्षण गर्नुपर्नेछ। यदि यसले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ भने, म तपाईंलाई मेरो सेवा गर्नेहरूसँग स्क्रीनशट छोड्दछु। रंगमा, म गाढा खैरो छनौट गर्न सिफारिस गर्दछु।
PNG मा तपाईंको वाटरमार्क बचत गर्नुहोस्
अन्तिम चरण भनेको हाम्रो कार्यहरू बचत गर्नु हो, यसको लागि PNG मा फाईल निर्यात गर्नुहोस्, सँधै त्यो पारदर्शी पृष्ठभूमि राख्दै। यसलाई एक फोल्डरमा राख्नुहोस् र तपाईंको नयाँ वाटरमार्क सधैं हातमा तपाईंको फोटोहरू हस्ताक्षर गर्न।
लोगो खोल्नुहोस् र पृष्ठभूमि हटाउनुहोस्
यदि तपाईंसँग पहिले नै लोगो छ, वा यदि तपाईं यो बनाउने दिमागमा हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई यो जान्नुपर्दछ कि यसलाई वाटरमार्कको रूपमा प्रयोग गर्नु एक उत्तम विचार हो। हामीले गर्ने पहिलो कुरा हो फोटोशपमा लोगो खोल्नुहोस् र यदि यो एक मा छ रंग पृष्ठभूमि (हाम्रो केसमा जस्तो लोगो पहेलो पृष्ठभूमिमा छ) हामी यसलाई हटाउनेछौं ताकि हामीसँग पारदर्शी पृष्ठभूमि छ।
पाठको विशेषताहरु परिमार्जन गरौं
यदि तपाईंको लोगोमा टाइपोग्राफी र चित्रहरू समावेश छन्, हामी पाठमा पहिलो ध्यान दिनेछौं। पाठ तह चयन गर्दै, हामी ०% भर्न कम गर्नेछौं र हामी तह शैली मेनू खोल्नेछौं (तह प्यानेलमा fx प्रतीक थिचेर र ड्रप-डाउन मेनूमा "स्ट्रोक" थिच्नाले)। हामी दुई प्रभावहरू लागू गर्नेछौं: स्ट्रोक र ड्रप छाया।
"पूर्वावलोकन" सक्रिय गर्दै परिवर्तनहरू कसरी हुन्छन् नियन्त्रण गर्दछ। तपाईले गर्नु पर्छ स्ट्रोक आकार समायोजित, मैले यसलाई २ px को मूल्य दिएँ, तर सबै कुरा तपाईले छान्नु भएको टाइपफेस र तपाईको स्वादमा निर्भर हुनेछ। «रंग In मा सेतो छनौट गर्नुहोस्.
हामी जान्छौं ड्रप छाया प्रभाव सेट गर्नुहोस्। म तपाईंलाई सुझाव दिन्छु गाढा खैरो र, तर तपाईं कालो छनौट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने। महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि यो गाढा र color्ग हो। अन्य परिणामहरूसँग खेल्नुहोस् जबसम्म तपाईं परिणामसँग खुशी हुनुहुन्न। यद्यपि यो स्वादको कुरा हो, यहाँ मूल्यमान्यताहरू छन् जुन मैले सेवा गरेका छन्।
दृष्टान्तको विशेषताहरु परिमार्जन गरौं
हाम्रो लोगोमा टाइपोग्राफी र एक इलस्ट्रेसन, एक स्पीच बबल हुन्छ। हामीले पछ्याउने प्रक्रिया अघिल्लो जस्तो हुनेछ। हामी दुई प्रभावहरू लागू गर्नेछौं, तर यस पटक दृष्टान्त तह चयन गर्दै: "स्ट्रोक र ड्रप छाया"। हामी प्यारामिटरहरू अनुकूलन गर्दछौं ताकि तिनीहरू हाम्रो इमेजोटाइपसँग राम्ररी फिट हुनेछन् (म तपाईंलाई स्क्रिनशट छोड्दछु जुनमा मैले लागू गरेको छु)। म सुझाव दिन्छु कि स्ट्रोक र छाया दुबैको रंग बिल्कुल उस्तै उस्तै होस् जुन तपाईंले टाइपोग्राफीको लागि छान्नुभयो।
त्यहाँ मात्र हुनेछ लोगोको हाम्रो नयाँ संस्करण PNG ढाँचामा निर्यात गर्नुहोस् हाम्रो फोटोहरूमा वाटरमार्कको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सक्षम हुन।
एउटा अन्तिम नोट
म कसरी मेरो वाटरमार्क थप्न सक्छु?
तपाईं फोटोशपको साथ आफ्नो वाटरमार्क थप्न सक्नुहुन्छ। प्रोग्राममा फोटो खोल्नुहोस् र PNG तान्नुहोस् जुन छुट्टै तहको रूपमा आयात हुनेछ। यसलाई तपाईं जहाँ चाहानुहुन्छ, राख्नुहोस् र यसलाई मनपर्ने आकार दिनुहोस्। यो पनि याद गर्नुहोस् तपाईं जहिले पनि वाटरमार्कको अस्पष्टता परिमार्जन गर्न सक्नुहुनेछ तहहरूको प्यानलको माथिल्लो भागमा, यदि तपाईंलाई कुनै फोटोग्राफमा तपाईंको लोगो अति हडबडीएको जस्तो लाग्छ भने (म सामान्यतया वाटरमार्कको अस्पष्टतालाई करीव 50०% सम्म घटाउँछु)।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » फोटोशपमा कसरी वाटरमार्क सिर्जना गर्ने
एडोब फोटोशपमा छविको पृष्ठभूमि रंग परिवर्तन गर्नुहोस्